Lammiwwan Itiyoophiyaa Lama Libiyaa Keessatti Ajjefaman.Hedduun Immo Eessa Buteen Isaanii Dhabameera.
Bitootessa 01, 2011
Libiyaa keessatti mormiin prezidaant Moammar Gaadaafii irratti gaggeefamu itti fufee yeroo jiru kanatti,Baqatonni biyya alaa garuu carraa isaan mudachuuf jiru bir’annaa guddaan eegaa jiran.
Waajiira itti gaafatamnii baqatootaa irra jiru kan addunyaa UNHCR mootummaan Libiyaa eega cufee booda akkasumas mootummaan gurraachoota Afrikaa bitee nu haleelsiisa jechuun kanneen mormii dhagesisaa jiran gurraacha ijaan arguu jibbuun, daran rakkoo jiru hammeessse jedhu.
Haala kanaaniis lammiwwan Itiyoophiyaa lama ajjefamaniiru.Kan to’annaa mootummaa jala galtee jirtuu Beengaazii keessa haalli jiru baqatootaaf akkaan rakkisaa ta’uu baqatonni ni dubbatu. Bengaazii keessatti gurraachonni ajjeefaman danuu dha,kanneen lubbuun hafanis eessa akka jiran namnii hin beeku baruufis rakkisaa dha.
Biyyaa irraa dhufneetti deebii’uuf sodaa nageenyaa qabna kan jedhan baqatonni, prezidaant Gaadaafii aangoo irraa buusuuf qabsoo gaggeefamu keessatti dhittaan mirga dhala namaa, hidhaa fi ajjeechaan gurrachoota Afrikaa irratti gaggeefamu dhimma dagatamee dha jedhan.
Baqatoota Itiyoophiyaa fi Ertraa gargaaruuf Roomaa keessatti jaarmyaa Ejenshiyaa Abaashaa jedhamu kan bu’ursan Abbaa Musee Zar’ay VOAf akka ibsanti irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee kan ta’an lammiwwan Itiyoophiyaa 54 donii lammiwwan xaaliyaanii fudhuuf gamasitti ergamtee turteen gara xaaliyaaniitti geessamaa kan jiran ta’uu ibsaniiru.
Oduu kana dhaga’anii buufata doniitti yaa’anii kan turan baqatoota kuma tokko caalan keessaa kanneen 350 ta’an mootumman qabee hidhuu isaa Abba Museen ibsanii odeefannoo sirrii ta’e ituu hin argatiin hedduminaan manaa yaa’anii hidhaaf of saaxiluu irraa baqatonni akka of qusatan gaafatan.
Dhaabni baqatootaa kan tokk mootummotaa UNHCRf komoshiinara kan ta’an Antoniyoo Gutarres ibsa barreefamaan baasaniin, waa’een baqatootaa fi lammiwwan biyya alaa kuma kurna hedduu kanneen Libiyaa keessatti danqamanii jiranii kan isaan yaaddessee ta’uu ibsan. Baqatoota gamas jiran baasuuf xayyaaras ta’e donii hin qabnu kan jedhan Gutarres biyyonni humna isaa qaban lammii ofii qofa otoo hin taanee kanneen biroos akka baasan gaafatan.
Keessumaa gurraachoota lammiwwan Afrikaa ta’an irra balaa guddaa ga’uu maluun akka garaa isaanii socho’uu ykn lubbuu ofii oolchuu hin danda’an yaaddoo jedhu qabna jedhan komishinarri dhaaba baqatootaa UNHCR Antoniyoo Gutarres.
Mootummonni biyyootii Afriikaa gama kaabaa fi kan Awuroopaa namoota Libiyaa keessaa dhessuun samii, galaana irraa,konkolaataa fi lafoo gara daangaa biyya isaanii dhaqqaban akka simatan kan gaafatan Gutarres kunis loogii tokko malee ta’uu akka qabu hubachisanii jiran.
Lammiwwan Afrikaa kanneen uuffee sahaaraa gadii Libiyaa keessa jiraataa turan keessaa torban darbe biyyattii gadhisanii ba’uu kan danda’an baayyee xiqqoo dha kan jedhan dubbi himtuun jaarmayaa godaantoota addunyaa (IOM) Jemnii Paandaay Libiyaan rakkoo kana keessatti godaantota lammiiwwan biyya alaa irratti akka hin qiyyaafanne IOM ni gaafata jedhan..
Gabaasaa Guutuu MP3 tuquun dhaggefadhaa